umthetho wabucala – Ifanitshala yeBaothian Co., Ltd.
Indawo ithatha imigaqo-nkqubo yabucala yomsebenzisi ngokungathí sina kwaye ngokungqongqo ihambelana nemithetho nemigaqo efanelekileyo. Nceda ufunde umgaqo-nkqubo wabucala ngononophelo ngaphambi kokuba uqhubeke nokuwusebenzisa. Ukuba uyaqhubeka nokusebenzisa iinkonzo zethu, ukufundile kwaye wakuqonda ngokupheleleyo konke okuqulathwe kwisivumelwano sethu.
Indawo ihlonipha kwaye ikhusela ubumfihlo babucala babo bonke abasebenzisi benkonzo. Ukubonelela ngeenkonzo ezichanekileyo nezenzelwe wena, Indawo izakusebenzisa kwaye ibhengeze ulwazi lwakho lomntu ngokwezibonelelo zalo mgaqo-nkqubo wabucala. Ngaphandle kokuba kubonelelwe ngenye indlela kulo mgaqo-nkqubo wabucala, Indawo ayizukuchaza okanye inikezele ngolwazi olo kubantu besithathu ngaphandle kwemvume yakho. Indawo izakuhlaziya lomgaqo-nkqubo wabucala amaxesha ngamaxesha. Xa uyavuma kwisivumelwano sokusetyenziswa kwenkonzo yeSiza, uthathwa njengevunyiweyo kuwo wonke umxholo wale mgaqo-nkqubo wabucala. Umgaqo-nkqubo wabucala yinxalenye yesivumelwano sokusebenzisa inkonzo.
Ububanzi be Aiphepha
Xa ubhalisa iSizaAccount sethu, ulwazi lobhaliso lomntu olunikezile ngokungqinelana neemfuno zeSiza;
b) Xa usebenzisa iinkonzo zenethiwekhi zeSayithi okanye undwendwela iphepha leWebhu, iSayithi ngokuzenzekelayo ifumana kwaye irekhode ulwazi kwisikhangeli sakho nakwikhompyuter, kubandakanya kodwa kungaphelelanga kwidilesi ye-IP, uhlobo lwesikhangeli, Ulwimi olusetyenzisiweyo, umhla wokufikelela kunye nexesha, isoftware kunye nolwazi lwenqaku lesoftware, kunye neerekhodi zephepha lewebhu ozifunayo;
c) Idatha yomntu efunyenwe siSayithi kumaqabane oshishino ngeendlela zomthetho.
d)Isiza sithintela ngokungqongqo abasebenzisi ekuthumeleni ulwazi olubi, njengobunqunu, iphonografi, kunye nokuhlambalaza. Siza kuphonononga umxholo opapashiweyo. Nje ukuba ulwazi olubi lufunyenwe, Zonke iimvume zomsebenzisi ziya kukhubazeka.
Uyaqonda kwaye uyavuma ukuba olu lwazi lulandelayo alusebenzi kulo mgaqo-nkqubo wabucala:
a) Ulwazi lwegama eliphambili olifakayo xa usebenzisa inkonzo yokukhangela enikezelwa liqonga lethu;
b) Ulwazi olufanelekileyo kunye nedatha eqokelelwe yiSiteand ekhutshwe nguwe, kubandakanya kodwa kungaphelelwanga ekuthatheni inxaxheba kwimisebenzi, Ulwazi lokuthengiselana kunye neenkcukacha zovavanyo;
c) Ukophulwa kwemithetho okanye imigaqo kunye namanyathelo athathwe sisiSiza ngokuchasene nawe.
Ukusetyenziswa kwe Mnaulwazi
I-Sitew ayizukubonelela, thengisa, uqeshiso, yabelana okanye uthengise ulwazi lwakho lomntu kuye nawuphi na umntu ongahambelaniyo, Ngaphandle kokuba uyifumene kwangaphambili imvume yakho, okanye umntu wesithathu kunye neSiza (kubandakanya abaxhasi beSiza) kukubonelela ngenkonzo ngokwahlukeneyo okanye ngokudibeneyo, nasemva kokuba inkonzo iphelile, baya kuthintelwa ekufikeleleni kuzo zonke izixhobo kubandakanya nezo zazifikeleleka ngaphambili kubo.
b) I-Sitealso ayivumeli naliphi na iqela lesithathu ukuba liqokelele, hlela, thengisa okanye usasaze iinkcukacha zakho simahla nangayiphi na indlela. Ukuba nawuphi na umsebenzisi weqonga weeSayithiengage kule misebenzi ingentla, Indawo inelungelo lokusiphelisa isivumelwano senkonzo kunye nomsebenzisi kwangoko kwakube kufunyenwe.
c)Ngenjongo yokukhonza abasebenzisi, Indawo inokukunika ulwazi olunomdla ngokusebenzisa ulwazi lwakho lomntu siqu, kubandakanya kodwa kungaphelelanga ekuthumeleni ulwazi ngemveliso kunye nenkonzo, okanye babelane ngolwazi namaqabane ethu ukuze bakwazi ukukuthumelela ulwazi malunga neemveliso kunye neenkonzo zabo (le yokugqibela ifuna imvume yakho yangaphambili).
Phantsi kwezi meko zilandelayo, Indawo izakuchaza iinkcukacha zakho ezipheleleyo okanye eziyinxalenye ngokweminqweno yakho okanye ngamalungiselelo omthetho:
a) Xela kumntu wesithathu ngemvume yakho yangaphambili;
b) Ukubonelela ngemveliso kunye neenkonzo ozifunayo, i-Sitemust yabelana ngeenkcukacha zakho kunye nomntu wesithathu;
c) Ngokwezibonelelo ezifanelekileyo zomthetho, okanye iimfuno zamaziko olawulo okanye ezomthetho, xela kubantu besithathu okanye amaziko olawulo okanye ezomthetho;
d) Ukuba wophula imithetho efanelekileyo kunye nemigaqo okanye isivumelwano seenkonzo seSayithi okanye imigaqo ehambelana nayo, kufuneka uxele kumntu wesithathu;
e) Ukuba ungumntu onesikhalazo malunga nepropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda kwaye ufake isikhalazo,iSites kufuneka siyityhile kummangalelwa ngesicelo sommangalelwa ukuze omabini amacala akwazi ukusingatha iimbambano ezinokubakho zamalungelo;
f)Kwintengiselwano eyenziwe kwiqonga leSiza, ukuba naliphi na iqela kwintengiselwano lizalisekisa okanye ngokuyinxenye lizalisekisa uxanduva lwalo lwentengiselwano kunye nezicelo zokwazisa ngolwazi, Indawo inelungelo lokuthatha isigqibo sokubonelela umsebenzisi ngolwazi oluyimfuneko olufana nolwazi lokunxibelelana neqela lakhe kwintengiselwano., ukulungiselela ukuqukunjelwa kwentengiselwano okanye ukusonjululwa kweembambano.
g) Olunye uxwebhu iSiteseems lubonakala lufanelekile ngokwemithetho, imimiselo okanye imigaqo-nkqubo yewebhusayithi.
Mnaulwazi Storage kunye Etshintsha
Ulwazi kunye nedatha emalunga nawe eqokelelwe siSiza iya kugcinwa kwiserver yeSiza kwaye / okanye iinkampani ezibandakanyekayo, kwaye olu lwazi kunye nedatha zinokudluliselwa kwilizwe lakho, Ingingqi okanye phesheya kolwandle apho ulwazi kunye nedatha eqokelelwe siSiza ikhoyo kwaye ifikeleleka kuyo, igcinwe kwaye iboniswe phesheya kolwandle.
a) Ukuba awuyamkeli ukwamkela ikuki, Siza kuseta okanye singene kwi-Siteon yakho ikhompyuter yakho ukuze ungene okanye usebenzise iinkonzo zethu zeqonga okanye imisebenzi exhomekeke kwicookies. Sebenzisa cookies, Sinokubonelela ngeenkonzo ezicingisisiweyo ezenzelwe wena, kubandakanya iinkonzo zonyuselo.
unelungelo lokukhetha ukwamkela okanye ukwala ikuki. Ungala ukwamkela ikuki ngokuguqula useto lwebrawuza yakho. Nangona kunjalo, ukuba ukhetha ukwala ukwamkela ikuki, ngekhe ungene okanye usebenzise iinkonzo zethu zewebhu okanye izinto ezixhomekeke kwicookies.
c) Lo mgaqo-nkqubo uyakusebenza kulwazi olufunyenwe ngecookie ezibekwe liSiza.
a) Iakhawunti yethu inomsebenzi wokhuselo lokhuseleko. Nceda ugcine igama lakho lomsebenzisi kunye negama eligqithisiweyo ngokufanelekileyo. I-Sitewill iya kuqinisekisa ukuba ulwazi lwakho aluyi kulahleka, Ukuphathwa gadalala okanye ukuguqulwa ngokufihla igama eligqithisiweyo lomsebenzisi kunye namanye amanyathelo okhuseleko. Ngaphandle kwale miqathango yokhuseleko ichazwe apha ngasentla, Nceda uqaphele ukuba akukho "amanyathelo okhuseleko afezekileyo" kwinethiwekhi yolwazi.
b) Xa usebenzisa iinkonzo zenethiwekhi zeSayithi kwintengiselwano ekwi-Intanethi, ngokuqinisekileyo kufuneka uxele iinkcukacha zakho, ezinjengeenkcukacha zonxibelelwano okanye idilesi yeposi, kwii-counterparties okanye ezinokubakho. Nceda ukhusele iinkcukacha zakho uze uzinike abanye xa kufanelekile. Ukuba ufumanisa ukuba iinkcukacha zakho zobuqu ziyavuza, ngakumbi igama lethu lomsebenzisi kunye negama lokugqitha, Nceda unxibelelane nenkonzo yethu yabathengi kwangoko ukuze iSayithican yethu ithathe amanyathelo ahambelanayo.
Ixesha lokuposa: 2020-04-30 16:04:31